Takelaka Tsara Soratra 001 by RanjaSoa Publishing (Paperback) - Lulu
Takelaka Tsara Soratra 001
By RanjaSoa Publishing
TSARA SORATRA dia Vatonamelankafatra mirakitra sy mitahiry lahatsoratra voakaly, na sombintantara na tantara noforonina na tononkalo na lahatsoratra fanadihadiana hafa. TSARA SORATRA koa dia Ambohipihaonana ho an’ny mpanoratra sy ny mpamaky. Eto no ahafahan’ireo mpanoratra Malagasy, na ireo vao manomboka, na ireo vao misandratra, na ireo efa kalaza, mizara sy mampiranty ny asa-sorany amin’ireo mpankafy izany. Ny Takelaka www.soratra.org sy ny TAKELAKA TSARA SORATRA dia orinezaky ny RanjaSoa Publishing. Ny mpanoratra ny lahatsoratra sy izany naka ny sary tsirairay miseho ato no tompon’ny lahatsoratra sy ny sary eo anatrehan’ny lalàna sy manolonana ny mpanjifa, ary izy koa no tompon’andraikitra mitazona ny zon’ny mpanoratra na ny copyright, fa tsy ny RanjaSoa Publishing. Raha manana fanontaniana ianao na manana lahatsoratra na vaovao ianao ka tianao zaraina eto amin’ny TSARA SORATRA dia alefaso amin’ny TsaraSoratra@gmail.com.
Lulu Sales Rank: 21212
Laharana 001, Sept-Nov 2017